ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ကစားသမား/နည်းပြအဖြစ်ပါ ရယူခဲ့သူများ (၁)
1 Oct 2018 . 5:13 PM
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ရင် ကစားသမားတစ်ဦးအတွက် ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှု၊ တစ်ကြိမ်မက ရယူနိုင်ခဲ့ရင် ဂန္ထ၀င်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရမယ်။ ကစားသမားဘ၀မှာသာမက နည်းပြဘ၀မှာပါ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ရခဲ့ရင်တော့ Greatest စာရင်းထဲမှာ ထည့်ရတော့မယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ကို ကစားသမားဘ၀မှာသာမက နည်းပြအဖြစ် ရယူနိုင်ခဲ့သူတွေဆိုတာက လက်ချိုးရေလို့ရပြီး စုစုပေါင်း (၇)ယောက်သာ ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီလို သမိုင်းဝင် မှတ်တိုင် စိုက်ထူခဲ့သူတွေက ဘယ်သူတွေများလဲ . .
၁. ဇီဒန်း Zidane
သူ့ခေတ်သူ့အခါမှတော့ အကောင်းဆုံးလို့ ပြောရမယ့်သူက ဇီဒန်းပါပဲ။ ၂၀၀၁-၀၂ ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ လှပတဲ့ Volley ကန်ချက်နဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းအတွက် အနိုင်ဂိုးသွင်းခဲ့သူ ဇီဒန်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ကစားသမားဘ၀မှာ (၁)ကြိမ်၊ နည်းပြဘ၀မှာ (၃)ကြိမ်ဆက် ရယူခဲ့ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် စံချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
Player – UEFA Champions League: 2001–02 (Real Madrid)
Coach – UEFA Champions League: 2015–16, 2016–17, 2017–18 (Real Madrid)
၂. အန်ဆယ်လော့တီ Ancelotti
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ကစားသမား/နည်းပြဘ၀မှာ (၅)ကြိမ်အထိ ရယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အေစီမီလန်အသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င် ကွင်းလယ်လူအဖြစ်သာမက ဂန္ထ၀င်နည်းပြအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ထားတဲ့ အန်ဆယ်လော့တီဟာ ချန်ပီယံလိဂ် (ဥရောပဖလား)ကို အေစီမီလန်ကစားသမားဘ၀မှာ (၂)ကြိမ်၊ နည်းပြဘ၀မှာ အေစီမီလန်နဲ့ (၂)ကြိမ်၊ ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့(၁)ကြိမ် ရရှိခဲ့တယ်။
Player – European Cup: 1988–89, 1989–90 (AC Milan)
Coach – UEFA Champions League: 2002–03, 2006–07 (AC Milan)
၃. မီဂွယ်လ်မူနော့ဇ် Miguel Munoz
ဥရောပဘောလုံးလောကကို ရီးယဲလ်အသင်း စတင်လွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ ၁၉၅၀ ကာလတွေမှာ မီဂွယ်လ်မူနော့ဇ်က ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ဥရောပဖလား(ချန်ပီယံလိဂ်)မှာ ပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမဆုံးဂိုးကို သွင်းယူခဲ့သူအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ မီဂွယ်လ်မူနော့ဇ်ဟာ ကစားသမားဘမှာ ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို (၃)ကြိမ်ဆက် ရယူခဲ့သလို နည်းပြဘ၀မှာလည်း ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့ (၂)ကြိမ် ရယူခဲ့တယ်။
Player – European Cup: 1955–56, 1956–57, 1957–58 (Real Madrid)
Coach – European Cup: 1959–60, 1965–66 (Real Madrid)
၄. ရီကတ် Rijkaard
ရီကတ်ဟာ ဒတ်ခ်ျဘောလုံးသမိုင်းမှာ အောင်မြင်မှု အများဆုံးကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြီး ကစားသမားဘ၀မှာ အေဂျက်စ်၊ အေစီမီလန်အသင်းတွေနဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ်(ဥရောပဖလား) (၃)ကြိမ်အပါအ၀င် ဆုဖလား(၂၂)ခုအထိ ရယူခဲ့တယ်။ နည်းပြဘ၀မှာလည်း ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့အတူ ၂၀၀၅-၀၆ ရာသီမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Player – UEFA Champions League: 1994–95 (Ajax)၊ European Cup (2): 1988–89, 1989–90 (AC Milan)
Coach – UEFA Champions League: 2005–06 (Barcelona)
ပရိသတ်ကြီးရေ .. ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ကစားသမားဘ၀နဲ့ နည်းပြအဖြစ် ရယူနိုင်ခဲ့သူ (၇)ဦးထဲက (၄)ဦးကို အပိုင်း(၁)အနေနဲ့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်း ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမှာပါ . . .
Photo:thesefootballtimes,Soccer, football or whatever,Goal.com
ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ကစားသမား/နညျးပွအဖွဈပါ ရယူခဲ့သူမြား (၁)
ခနျြပီယံလိဂျဖလား ဆှတျခူးနိုငျခဲ့ရငျ ကစားသမားတဈဦးအတှကျ ကွီးမားတဲ့ အောငျမွငျမှု၊ တဈကွိမျမက ရယူနိုငျခဲ့ရငျ ဂန်ထဝငျအဖွဈ သတျမှတျခံရမယျ။ ကစားသမားဘဝမှာသာမက နညျးပွဘဝမှာပါ ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား ရခဲ့ရငျတော့ Greatest စာရငျးထဲမှာ ထညျ့ရတော့မယျ။ ခနျြပီယံလိဂျကို ကစားသမားဘဝမှာသာမက နညျးပွအဖွဈ ရယူနိုငျခဲ့သူတှဆေိုတာက လကျခြိုးရလေို့ရပွီး စုစုပေါငျး (၇)ယောကျသာ ရှိပါသေးတယျ။ အဲဒီလို သမိုငျးဝငျ မှတျတိုငျ စိုကျထူခဲ့သူတှကေ ဘယျသူတှမြေားလဲ . .
၁. ဇီဒနျး Zidane
သူ့ခတျေသူ့အခါမှတော့ အကောငျးဆုံးလို့ ပွောရမယျ့သူက ဇီဒနျးပါပဲ။ ၂၀၀၁-၀၂ ရာသီ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲမှာ လှပတဲ့ Volley ကနျခကျြနဲ့ ရီးယဲလျအသငျးအတှကျ အနိုငျဂိုးသှငျးခဲ့သူ ဇီဒနျးဟာ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ကစားသမားဘဝမှာ (၁)ကွိမျ၊ နညျးပွဘဝမှာ (၃)ကွိမျဆကျ ရယူခဲ့ပွီး ခနျြပီယံလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ စံခြိနျဖွဈခဲ့တယျ။
၂. အနျဆယျလော့တီ Ancelotti
ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ကစားသမား/နညျးပွဘဝမှာ (၅)ကွိမျအထိ ရယူခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ အစေီမီလနျအသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျ ကှငျးလယျလူအဖွဈသာမက ဂန်ထဝငျနညျးပွအဖွဈ မှတျတမျးဝငျထားတဲ့ အနျဆယျလော့တီဟာ ခနျြပီယံလိဂျ (ဥရောပဖလား)ကို အစေီမီလနျကစားသမားဘဝမှာ (၂)ကွိမျ၊ နညျးပွဘဝမှာ အစေီမီလနျနဲ့ (၂)ကွိမျ၊ ရီးယဲလျအသငျးနဲ့(၁)ကွိမျ ရရှိခဲ့တယျ။
၃. မီဂှယျလျမူနော့ဇျ Miguel Munoz
ဥရောပဘောလုံးလောကကို ရီးယဲလျအသငျး စတငျလှမျးမိုးခဲ့တဲ့ ၁၉၅၀ ကာလတှမှော မီဂှယျလျမူနော့ဇျက ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ အဓိက အခနျးကဏ်ဍမှာ ပါဝငျခဲ့တယျ။ ဥရောပဖလား(ခနျြပီယံလိဂျ)မှာ ပွိုငျပှဲရဲ့ပထမဆုံးဂိုးကို သှငျးယူခဲ့သူအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့တဲ့ မီဂှယျလျမူနော့ဇျဟာ ကစားသမားဘမှာ ရီးယဲလျအသငျးနဲ့အတူ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို (၃)ကွိမျဆကျ ရယူခဲ့သလို နညျးပွဘဝမှာလညျး ရီးယဲလျအသငျးနဲ့ (၂)ကွိမျ ရယူခဲ့တယျ။
၄. ရီကတျ Rijkaard
ရီကတျဟာ ဒတျချြဘောလုံးသမိုငျးမှာ အောငျမွငျမှု အမြားဆုံးကစားသမားတဈဦးအဖွဈ သတျမှတျခံခဲ့ရပွီး ကစားသမားဘဝမှာ အဂေကျြဈ၊ အစေီမီလနျအသငျးတှနေဲ့အတူ ခနျြပီယံလိဂျ(ဥရောပဖလား) (၃)ကွိမျအပါအဝငျ ဆုဖလား(၂၂)ခုအထိ ရယူခဲ့တယျ။ နညျးပွဘဝမှာလညျး ဘာစီလိုနာအသငျးနဲ့အတူ ၂၀၀၅-၀၆ ရာသီမှာ ခနျြပီယံလိဂျဖလား ရယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ပရိသတျကွီးရေ .. ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ကစားသမားဘဝနဲ့ နညျးပွအဖွဈ ရယူနိုငျခဲ့သူ (၇)ဦးထဲက (၄)ဦးကို အပိုငျး(၁)အနနေဲ့ ဖျောပွလိုကျပါတယျ။ ကနျြတဲ့သူတှကေိုလညျး ဆကျလကျဖျောပွသှားမှာပါ . . .
by Ko Kyue . 20 mins ago